Maxthon Browser Maababka Gaabanaha iyo Mareegaha Mouse
Maqaalkani waxa loogu talagalay oo kaliya loogu talagalay isticmaalayaasha ku shaqeeya Maxthon Cloud Browser ee Linux, Mac OS X, macro Sierra, ama nidaamyada hawlgalka Windows.
Maanta adduunka ugu dhaqsaha badan, miisaaniyadu waxay noqon kartaa mid aad u soo dhaweynaya nolosheena. Hadday noqoto waddo degdeg ah xafiiska ama hab fudud oo loo diyaariyo casho, wax kasta oo naga badbaadiya waqti iyo dadaal badanaa waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid wanaagsan. Isla sidaas oo kale ayaa loo sheegi karaa in lagu faafiyo Webka, halkaasoo ay qaadato tallaabooyinka caadiga ah sida furitaanka cusub ama furitaanka bogga internetka waxaa lagu soo gaabin karaa caawimaad gaaban iyo dhaqdhaqaaqa muraayadaha.
Maxthon Cloud Browser wuxuu bixiyaa jaangooyo isku dhafan iyo maab-gaaban, iyo sidoo kale awoodda ay labadiinaba abuuri karaan adiguna aad u habaynayso kuwa horayba ugu jiray baraha. Barashada sida loo isticmaalo waqtiyadani waxay kaa dhigi doontaa isticmaale aad ufiican Maxthon, taasoo keentay waayo-aragnimo wacan. Casharadani waxay faahfaahin ka bixinayaan ins iyo ka baxsashada maab-dhiska Maxthon's iyo dhaqdhaqaaqa jilida, taas oo kuu oggolaaneysa inaad xakameyso barta shabakada sida aad marnaba u maleyneynin suurtagal.
Maxthon waxay kuugu soo darsantaa dhowr kumbuyuutar oo dhexdhexaad ah, oo ka mid ah hawlaha ka soo rogaya boggaaga guriga ilaa furaha muhiimka ah ee muhiimka ah kaas oo si dhakhso ah u qarinaya barta shabakadda.
Editing Kumbuyuutarka Maababka
Qaar ka mid ah maababka isku-dhafan ee Maxthon ayaa la edbiyaa, halka qaar kalena ay is-beddelaan. Awoodda inaad abuurto furahaaga furaha ah ayaa sidoo kale la bixiyaa, adigoo ku daraya isku-xirayaasha xulashadaada in ay sameeyaan ficilada shabakada.
Si aad uhesho InterConnect Interface, marka hore riix badhanka menu ee Maxthon; oo ay matalayaan sadex xariiq oo jaban oo ku yaala dhinaca geeska midig ee daaqada baraha. Marka liiska hoos loo dhigo, dooro Settings .
Xiriirka Maxthon ee " Settings Settings" waa in hadda lagu soo bandhigo tab cusub. Guji furayaasha yar yar , laga helo qaybta bidixda bidix.
Doorashooyinka Maxkon ee Muujiyeyaasha waa in hadda la soo bandhigaa. Qeybta koowaad ee ugu sareysa, ee lagu magacaabo Boss Key , waxay kuu ogolaaneysaa inaad awood u yeelato ama aad joojiso habka loo isticmaalo gaaban iyo sidoo kale wax ka beddelka isku-dhafka muhiimka ah ee la xiriira.
Boss Key waa dhab ahaan waxa moniker-ka ah ay tahay in ay noqoto, gaaban oo si dhakhso ah u qarinaya dhammaan daaqadaha Maxthon iyo sidoo kale shaqaalaheeda shaqaale ee ka soo booqda kasta oo aan la filayn. Isticmaalka default, safarka this nifty this waxaa loo soo bixi karaa aan firfircooneynin iyada oo ka saareen calaamad calaamad ku helay ee ku xigta Doorka Enable Boss Enable .
Furaha asalka ah ee loo xilsaaray khidadahan waa CTRL / COMMAND + GRAVE ACCENT (`) . Haddii aad jeceshahay inaad bedesho goobtan si aad isugu dheelitirto aad jeceshahay, riix badhanka raacsan oo riix furaha ama furaha aad rabto inaad ku wareejiso amarka Boss Key. Isku-dhafkan waa in hadda lagu soo bandhigaa wada-hadallada kor ku xusan. Markaad ku qanacsan tahay furaha (yada) la doortay, riix badhanka OK si aad u codsato isbedelka oo aad ku soo celiso shaashadda Maxthon's Shortcut Key .
Maabab kasta oo ka jira xarfaha ayaa lagu soo bandhigayaa miiska labadaba. Qaybta ugu horeysa, oo lagu calaamadeeyay amarka , waxaa ku jira ficil ku xiran miisaankiisa. Sadarka labaad, oo lagu calaamadeeyay Shortcut , wuxuu ka kooban yahay hal ama dhowr isirro oo muhiim ah oo la xiriira ficilkan. Waxaa suurtagal ah in la helo wax ka badan hal mitir gaaban oo ku xiran amar gooni ah. Waxa kale oo suurtagal ah in la yeesho gaaban oo aan dhab ahayn, laakiin waa furaha kaliya.
Si aad u beddesho muraayadda hadda jira, marka hore, bidix-guji furaha ama isku dhafan. Sanduuq yar oo wada-hadal ah ayaa ka muuqda oo ku qoran magaca amarka hadda jira iyo furaha muhiimka ah ee la xidhiidha (s). Si aad u bedesho qiimaha, marka hore, riix furaha ama furaha aad rabto. Waqtigan xaadirka ah waa in aad isku dhafan tahay furaha muhiimka ah ee wadahadalka, bedelida goobta hore. Markaad ku qanacdo isbeddelkaaga, riix badhanka OK . Hadda waa in laguugu soo celiyaa bogga Furan ee Kumbuyuutarada iyadoo la isticmaalayo gaaban cusub.
Fadlan ogsoonow in dhammaan furayaasha gaaban aan la diyaarin karin. Kuwa aan la beddeli karin waxaa weheliya astaanta astaanta.
Tirtiridda Gaabanaanta Maababka
Si aad u tirtirto isku-dhafka muhiimka ah ee furaha ah, ugu horeyn, ka sii gudbi qaybta Maab Marka xigta, riix 'X' oo ka muuqata geeska sare ee sanduuqa sanduuqa. Farriin xaqiijin ayaa hadda muuqata, waydiisaneysaa waxyaabaha soo socda: Ma rabtaa in aad ka saarto sanduuqa la soo xulay? Si aad u sii wadato nidaamka tirtirida, guji badhanka OK . Haddii aadan rabin inaad sii wadato, guji Cancel .
Abaabulidda Miisaan Cusub
Maxthon waxay bixisaa awooda lagu abuurayo isku-xireyaasha cusub ee gaaban ee furaha ah, iyaga oo ku xiraya mid ka mid ah tobanka xayawaannada browserka. Sida aad horay u soo baratay, ficilada dhowr ah sida cusbooneysiinta bogga hadda ama aad tirtirto taariikhda daalacashada horey u lahaan jirtay maababka maskaxda ee la xidhiidha iyaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli abuuri kartaa furahaaga furaha ah ee loogu talagalay amarada shabakadaha markaad ka tagto kuwa hadda jira.
Waxaa sidoo kale jira tiro amarro ah oo aan lahayn furaha gaaban ee la xiriira iyaga. Xaaladahaan, Maxthon waxay bixisaa awoodda aad ku meelayn karto isugeyntaada muhiimka ah ee ficil kasta oo browser ah.
Hadday abuurto isku-dhaf cusub oo loogu talagalay amar gaaban-yar ama u habaynaya furaha kale ee gaaban, geeddi-socodku waa isku mid. Marka hore, raadso amarka su'aasha. Marka xigta, qaybta gaaban , ku dhaji cawl iyo caddaan iyo calaamad.
Sanduuqa wada-hadalka ee yaryar waa inuu ahaadaa boodhadhka daaqada ee ugu muhiimsan. Si aad u abuurto casrigaaga cusub, marka hore, riix furaha ama furaha aad rabto. Waqtigan xaadirka ah, isku-darka cusub ee muhiimka ah waa in lagu arko wadahadalka. Markaad ku qanacsan tahay ku daridaada, guji badhanka OK . Hadda waa in laguugu soo celiyaa bogga Furan ee Kumbuyuutarada iyadoo la isticmaalayo gaaban cusub.
Dhaqdhaqaaqa Dhaqanka ee Isku-dhafan
Miisaanka gaaban wuxuu qayb ka yahay isla'egta marka ay timaaddo inaad isbarbar dhigto waayo-aragnimada aad ku aragtid Maxthon. In ka badan diyaargarow jimicsi isku dhafan ayaa sidoo kale la heli karaa, qaar ka mid ah ayaa loo xilsaaray ficilka shabakada halka kuwa kale ay u furan yihiin habeynta. Si aad u fuliso dhaqdhaqaaqyada badanaaba, waxaad xaq u leedahay inaad si deg deg ah u jiidatid jiirkaada jihada la baray. Fadlan xusuusnow in dhaqdhaqaaqyada qaarkood u baahan yihiin isticmaalka baqshadda badhanka ah ee mouse-kaaga iyo sidoo kale ficil wareeg ah. Inta lagu jiro fulinta jilitaanka jilitaanka, waxaad arki doontaa xariiq midabeysan oo loo yaqaan 'Mouse U-Monitoring Trail'.
Joogitaanka Super Drag iyo Drop
Maxthon's Mouse Options, oo lagu helay adigoo gujinaya Mareegga Mouse ee qaybta bidix ee bidixda, waxay bixiyaan karti ay u qaabeynayaan dhawr goobood. Marka ugu horeysa ee lagu calaamadeeyay Jajab iyo Buufiyeeye , wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku dhejisid qaybta ' Super Drag & Drop' ee shabakadda adoo isticmaalaya ama ka saaraya calaamadda jeegga ee sanduuqa kuxiran.
Dragon & Drop waa muuqaal qumman oo isla markiiba fuliya raadinta ereyga muhiimka ah, wuxuu furaa iskuxir, ama wuxuu sawir muuqaal ah ku sameeyaa tabo cusub. Tani waxaa lagu gaari karaa adigoo haysta badhankaaga mouse ee isku-xidh, muuqaal, ama qoraalka muhiimka ah, ka dibna jiidaya iyo kala-soocidda xulashada kaliya dhowr pixan jihe kasta.
Xulashada xiga, oo ay weheliyaan sanduuqa "checkbox", ayaa kuu oggolaanaya inaad joojiso ama dib u bilawdo dhaqdhaqaaqa muuska oo dhan.
Mareegta Mareekanka , oo ah hooska cagaaran ee default, waa raadka cursada ee bandhigaya sida aad u dhaqmayso muraayadda jiirka. Maxthon waxay awood u leedahay inay bedesho midabkan mid kasta oo ka mid ah RGB. Si aad sidaas u sameyso, marka hore, riix sanduuqa midabka leh ee ku xiga ee ku xigta Xulashada Midabka Mareegta . Marka lakala midabtakale u muuqdo, riix midabka la rabo ama ku beddel xarafka midabka hexaha ee dardargelinta la bixiyay.
Xayeysi Dhaqdhaqaaqa Mouse
Intaa waxaa dheer in ay bixiyaan dhowr farsamooyin jilbaha hore, Maxthon waxay bixisaa ikhtiyaarka ah in ay wax ka beddelaan iyada oo loo marayo interface si fudud loo isticmaali karo. Muujin kasta waxaa lagu muujiyaa miiska labadaba. Qaybta ugu horeysa, oo lagu calaamadeeyay Mouse U Noqoshada , waxay ka kooban tahay tilmaamaha lagu fulinayo ficil kasta. Qaybta labaad, oo lagu calaamadeeyay Tallaabada , waxay taxeysaa ficilka shabakadda ee la socda.
Si wax looga bedelo jadwalka jadwalka ee jira, marka hore waxaad ka tegi kartaa meel kasta oo ka mid ah safka miiska. Pop-up ayaa hadda muuqata, oo ay ku jiraan ficil kasta oo browser ah oo laga heli karo gudaha Maxthon. Tallaabooyinkaan waxaa loo kala saaraa saddexda kooxood ee soo socda: Tab , Browsing , iyo Feature . Si aad u qorto ficil cusub oo ku saabsan habdhaqanka su'aasha ah, riix guji. Hadda waa in laguugu soo celiyaa bogga xulashada Mareegaha , iyadoo isbeddelkaaga la arki karo.
Maxaa Cusa Cusub leh Windows 7?
6 Sababaha Windows Beats Mac
Sidee looga saaraa fayraska marka uu kumbuyuutarku shaqeyn waayo
Windows 7: Tilmaamaha Qeexidda
Maxaa dhacay Hawl Dhageysiga Windows 7?
Windows Vista: Buugta Maqnaanshaha
Samee Isticmaalka Mashruuca SOMPRODUCT si loo tiriyo shuruudaha kala duwan
Sida loo cusbooneysiiyo Your iPhone Carrier Settings
Top 20 Qalabka Xafiisyada Microsoft iyo Talooyin loogu talagalay Isticmaalayaasha Dhexe
Waa maxay Webmaster?
Sida Loo Dhigto Sawirada Sony PlayStation 4
Sida loo demiyo Android 4G ee Verizon
7 Dib-u-dejin ama lacag-bixiye ah oo bilaash ah
Qalabka Daboolka Qabsashada iyo Nalka Dhigashada Guryaha Guriga
Ma Sharci Lahaa Inaad Isticmaalato Website-yada Warbaahinta Isku-jira?
Sida Loo Soo Wareego Liis Waafaqsan oo ka socda Gmail Nuqulka
Sababta Sababtoo ah Laptop-kaaga Habboon Si Dhaxan
Sidee loo isticmaalaa 192.168.0.0 IP Address?
Sida loo helo IP iyo MAC Cinwaanada Microsoft Windows
Talooyin ku Saabsan Amniga Si Jilbahaaga u Safra
Dayactir iyo Dib u Raadi Sawir Sawir ah Sawirada